Nzira yekufambisa sei dhizaini yeSemalt uye kuishandisa kuenzanisa yakakwira paGoogle
Zvinotora makumi mashanu emamironds kune vashandisi kukudziridza maonero ewebhusaiti yako. Vashandisi vanotsvaga yakareruka yekushandisa pane yavo saiti. Nepo iri zano rakanaka kune chimwe chikamu chewebsite yako, Semalt akaisa izvi kune yavo webhusaiti itsva.
Tsamba yewebhu yeSemalt itsva inotsvaga kubatanidza yakapfava, dhizaini yemazuva ano neinoreruka kuverenga. Neiyi dhizaini, Semalt yaita kuti zvive nyore kunzwisisa kuti vangakuise sei kuGoogle yepamusoro.
Kukurumidza Kuongorora yeSEO Tauro
Tisati tapinda zvakanyanya munyama yemusoro wenyaya, zvakakosha kuti uve nekunzwisisa kwakazara kwemamwe eanodiwa jargon. Yedu blog ine gwara rakazara pane SEO kana uchida kuchera zvakadzika mukati mekutanga. Kune iyi nyaya, tichaenda pamusoro peedzimwe tsanangudzo dzakakosha.
SEO inomira Yekutsvaga Injini Yekutsikisa. Iyo ndiyo maitiro ekuita kuti webhusaiti yako ive nyore kutsvaga pane internet.
AutoSEO chigadzirwa chakaburitswa naSemalt icho chiri kune avo vari kuda kupinda muSEO vasina kuisa mari yakawanda.
FullSEO ndiyo yakakwira vhezheni ye AutoSEO inosimbisa kushanda ne SEO nyanzvi uye maneja.
SSL chinhu chekuchengetedza chinoita kuti data revatengi richengeterwe pawebsite yako rive rakachengetedzeka.
Keywords ndiwo mashoko chaiwo kana mashoko kuti vanhu vatsvake paanowana website yako.
Nzvimbo ndeye chinzvimbo peji rako, kana keyword, inoonekwa pane yekutsvaga injini.
Traffic ndiyo nhamba yevanhu vanoshanyira yako saiti.
Kunzwisisa iyo itsva Semalt webhusaiti
AutoSEO, FullSEO, uye SSL zvichiri zvigadzirwa zvinoshandiswa naSemalt kushinha saiti yako. Sezvakataurwa mune yedu yapfuura bhurogi post pane iyo nyaya, izvi zvese zvinogadzirwa zvigadzirwa zvine proven track rekodhi yekubudirira. Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo pamusoro pechigadzirwa-kumusoro, tapota tarisa iyo yekare post.
Kune ino blog, tichava takatarisa mukutsvaga zvitsva zvinhu uye magadzirirwo e webhusaiti itsva. Semalt akaunza zvimwe zvinonakidza maficha akakodzera kupfuura.
Mhando dzekutsvaga Mapeji Mapeji (SERP)
Peji Kuzivikanwa Tarisa
Kune Google Webmasters
Peji Yekumhanyisa Ongororo
Kunzwisisa itsva Semalt dhibhodhi
Iyo dashboard nyowani ichine akawanda mafilter ane simba kubva pane yekare. Musiyano wakakosha unouya kubva mukuchinja mune iyo interface inosimbisa izvo zvinodiwa nemushandisi.
Paunenge uchitsikitsira pasi, iwe uchaona kuti mangani emashoko ako akakosha ari pamusoro, 1, 10, 30, uye 100. Iyi dhibhodhi inopa iwe zano rekuti ako makuru ekuita makuru mazwi ndeapi. Iwe unogona kushandisa ruzivo urwu kusimbisa mazwi akatsvaga, akatsvaga.
Iwe unogona kuona kuti iyo seti yemashoko akakosha anonyanya kuunza kutengesa kushandurwa kune webhusaiti yako. Semalt's SEO dhibhodhi inogona kukubatsira kuti uone kuti ndeapi mazwi makuru anounza mamwe traffic. Yakasanganiswa ne data pane huwandu hwekutengeserana pane webhusaiti yako, unogona kuona kuti uri kukwezva mhando yemotokari.
Kunzwisisa iyo Yekutsvaga Injini Yekutsvaga peji (SERP)
Tsvaga Yekutsvaga Mhedzisiro Peji inokupa ruzivo rwakadzama nezvekuti peji rako rewebhu rinowanikwa sei mukutsvaga. Iyo inokupa iwe wakazara ruzivo rwekuti ndeapi mazwi makuru akaiswa uye kuti anotungamira sei kune peji rako. Iyo inopawo ruzivo rwusina kuwanikwa pamwe nemamwe akawanda SEO mawebhusaiti: ruzivo rwevanokwikwidza.
Iwe unogona kana kusarudza kusarudza iyi kuenzanisa neyako yaunofarira injini yekutsvaga. Google ndiyo nhamba yekutanga injini yekutsvaga munyika, asi kana iwe ukawana vateereri vangangodaro kuburikidza nekushandisa Yahoo kana Bing, unogona kuwana mazwi akakosha ekubhadhara zvirinani uko. Iwe unogona kuda kugadzira mushandirapamwe unotsvaga kurova vako vakwikwidzi kune ese matatu injini.
Kana uchifunga nezve SEO, Semalt anonzwisisa kuti data ndiyo zvese. Makambani mazhinji achakubatsira iwe kugadzira mapurojekiti eGoogle AdWords, asi ichi chingori mhinduro pfupi-pfupi. Vashambadziro havazovandudze kutsvaga kwekutsvaga kwewebsite yako nenguva, asi kukupa kukurudzira kwechinguva kunopera nemari. Mawebhusaiti akavakirwa neSEO mupfungwa nemusoro anorova pamusoro pemapeji aya uye anoramba achikwira kumusoro nekugadziriswa kwekugara.
Chii chinonzi Peji Mukubatana Cheki?
SEO ndechimwe chinhu chinowanzoda kuti iwe ugone kuve wakasarudzika nepo zvakare zvakafanana nevakwikwidzi vako vanoita chinzvimbo chemazwi.
Nyanzvi dzeSimalt dzeSEO vanyori vanoziva iyi nyaya nekukupa iwe unokosha mazwi ayo achataridzika apo achipa vanyori vanogona kunyora iwo ega emukati SEO chiyero chisina kusimba, asi Semalt anotova nenyaya dzinotaura kuti ibudirire.
Semuenzaniso, ngatiti iwe wanga uri wekungonyorwa zvemukati munyori aive achangopinda mubhizinesi, asi iwe unoda zvishoma rubatsiro kuti peji rako riite muhoro. Pazasi pane chidiki chidiki chakatorwa pane peji rako chakatariswa neiyo peji yekudyidzana cheki nzvimbo yeiyo yeSemalt webhusaiti.
Iwe uchaona kuti pane zvakakwirira zvepamusoro pane yakawanda peji. Mushure mekumhanyisa kuburikidza neyemukati cheki, yakaziva kuti zvikamu izvi zviri kune dzimwe nzvimbo pawebhu. Semhedzisiro, iyi peji yakasarudzika iri pachikamu gumi nemana kubva muzana.
Injini yekutsvaga inokwanisa kukwirisa zvirimo kana zvichinge zvichinzi zvine mukurumbira kana sosi yakavimbika. Imwe nzira injini yekutsvaga inoona iyi ndeye kuburikidza nekusiyana kwezvinhu zvacho. Ipo SEO yakatsunga kutsvaga mazwi akakosha, ayo masayiti mazhinji angagovera, webhusaiti iyo isingakwanisi kumira kunze kweboka revanhu icharamba ichikwira zvisina kunaka.
Semalt ikambani inoziva izvi. Nekubatanidza izvi neSERP yedu, tinogona kunyatsoona kana mushanduko yemaitiro iri kudiwa kana kwete. Iwe unogona kuve wakakwanira zvakakwana kuti uve pachikamu chepamusoro chegumi nekufunga zvishoma kune izvi. Zvakadaro, gumi gumi yepamusoro inoda kuti bhizinesi rako riite musiyano kuburikidza nekunongedzera chaiko mazwi akakosha pamwe nezvakasiyana zvemukati.
Kutsvaga kweGoogle Webmasters naSemalt
Seimwe yemakambani makuru pasi, unogona kunge uchitoziva kuti Google ine zvakawanda zvekushandisa pakuongorora mashandiro. Semalt anoona kutsigira iko kushanda nekushandisa yake timu yeSEO nyanzvi nemaneja kukurudzira izvi. Kunyange zvakadaro, kune avo vatove pasi pechirongwa chewemasters, Semalt ane mhinduro iwe zvakare.
Nekukodha faira reHTML kubva kune webhusaiti yavo uye kurigadzika kune webhusaiti yako, Semalt anokwanisa kutarisa zvimwe zvakadzama data. Iwe unogona zvakare kusarudza kuisa iyo HTML mune yako saiti zvakare. Kana iwe uine chero kuvhiringidzika maererano nemaitiro aya, inzwa wakasununguka kusvika kune yavo yevatengi rutsigiro email. Kana iwe uchida imwe chiteshi, ruzivo rwavo rwekuonana ruri pazasi peji rega.
Zvakare, kuisa dhaidhi yakananga kuSemalt kunoderedza huwandu wenzvimbo kwaunochengetedza neyako data. Izvi zvisati zvaitika, iwe unogona kunge uine imwe dashboard yewebhu webhusaiti, imwe dhata re keyword analytics, uye imwe yedhisap yedata. NaSemalt, zvese izvo zviri pane imwe saiti.
Peji Yekumhanyisa Ongororo uye nemabatiro ayo anogona kuita yako SEO
Kana zvasvika kune SEO, iwe pamwe haufungi nezve kumhanya kwe peji rako kune chero yakakosha mhedzisiro. Nekudaro, iyo chiyero chekuburitsa peji rako ine zvakawanda zvinochinja pane SEO.
Kiyi iri mushoko rekuti "optimization," saiti yakagadzirisirwa zvakanaka ndeimwe inoshaya zvidhori zvakaputswa, zvishwe, uye mitoro nekukurumidza. Kana iyo Semalt timu yeSEO nyanzvi dzakawana webhusaiti, kuongororwa kwavo kucharatidza izvi zvakaputsika lintlha uye kuve nechokwadi chekuti iwo chete akakodzera ruzivo rwemitoro kumutengi.
Tichifunga nezve iya yekutanga nhamba pane vanhu vane makumi mashanu emamirisecond ekuteerera nguva, zvakakosha kuti uve nekukurumidza peji iri nyore kuverenga. Pazasi pane dhibhodhi rauchashandisa kuteedzera kumhanya kwako.
Sezvauri kuona, iyo peji peji ratiri kushandisa rakanaka kwazvo. Iyo ine mashoma zvikanganiso zvidiki zvaunogona kutevedzera, asi izvo zvingave zviri shanduko yekumwe kutengesa kungangoitika. Nekudaro, iyi dashboard yakanangana neiyo desktop desktop. Kana tikatarisa kune mobile mobile ino peji rewebhu, iyo icharatidza chimwe chinhu chakasiyana.
Ne makumi masere neshanu muzana evaAmerican vanoshandisa smartphones, iwe unofanirwa kuziva kukosha kwekufambisa kwefoni. Muenzaniso uri pamusoro unoudza kuti webhusaiti iyi iri pakati pevanokwikwidza. Nekudaro, Semalt inoita basa rinotora iwe pamusoro wepakati.
Dashibhodhi idzva raSemalt rinogona sei kundibatsira kuti ndisvike kuGoogle yepamusoro?
Huwandu hwe data hwaunodya zuva nezuva hwakawandisa. Nekuda kweizvozvo, hazvigone kuenderana nekugeda kwemazuva ese. Paunosanganisa zviitiko zvako zvenguva dzose semuridzi nekubata webhusaiti, izvo zviviri zvichabvisa kubva kune mumwe.
Maitiro aSemalt inzira yekurerutsa maitiro ekutungamira kwesaiti nenzira iyo kwaunogona kutungamira kutarisisa kwako kune kwainofanirwa kunge iri: bhizinesi rako. Neboka raSemalt rakatsaurirwa revanyanzvi vanofara kukutungamira kuburikidza neSEO, iwe uchazviwana iwe uri pamusoro peGoogle.
Iyo dashboard ndeye Semalt mhedzisiro yemaitiro ekuziva izvo izvo mutengi anoda. Iine hurongwa hwakareruka, tinoda kuva nechokwadi chekuti hausi kungo gadzirisa nguva dzose pane manejiti eako SEO emishandirapamwe, asi iwe unonzwisisa uye unoziva kukura kunounzwa nemakwenzi aya kubhizinesi rako.
Kana iwe uri muridzi webhizinesi uye uchida kuita traffic, Semalt yakagadzirira kukuendesa kunzvimbo kwaunogona kukwevera traffic, kuita mutengi, uye kuwedzera kutengesa.